Fibre Laser Ukumaka Machine FOL-10/20/30/50 - China Dongguan Glorystar Laser
Fibre Laser Ukumaka Machine FOL-10/20/30/50
Umkhiqizo Izici Inkazimulo laser ithuthukisa futhi ukhiqiza umoya ephelele ukupholisa Fibre Optical Laser tekumaka e China. Kuyinto kwemvelo friendly, ukusetshenziswa ongaphakeme, ngokuzenzakalelayo ngokugcwele futhi ehola laser uhlelo. Lokhu zokudala laser uhlelo kwenza optical lokuguqulwa-38% -50%. I Ukupholisa emoyeni ukwazi ukuhlangabezana nezidingo zesistimu. Lolu hlelo laser siwusayizi amancane ezihlangene. Fibre okukhipha, unga kalula kwenza 3D ukuhlelwa uhlelo. I emuva isolator buka lokwentile, elisebenzisa particularit ...
Ubuningi oda: 1SET
Inkazimulo laser ithuthukisa futhi ukhiqiza ephelele emoyeni Ukupholisa Fibre Optical Laser tekumaka e China. Kuyinto kwemvelo friendly, ukusetshenziswa ongaphakeme, ngokuzenzakalelayo ngokugcwele futhi ehola laser uhlelo. Lokhu zokudala laser uhlelo kwenza optical lokuguqulwa-38% -50%. I Ukupholisa emoyeni ukwazi ukuhlangabezana nezidingo zesistimu. Lolu hlelo laser siwusayizi amancane ezihlangene. Fibre okukhipha, unga kalula kwenza 3D ukuhlelwa uhlelo. I emuva isolator buka lokwentile, elisebenzisa ngemininingwane ye wavelength nesiqondiso laser, futhi isakhiwo ekhethekile ngaphakathi emuva isolator sibonakalisa bangavimbela laser kuvezwa umsebenzi isiqeshana ukugwema laser ngokufaka oscillator laser futhi ilimaze oscillator laser.
izinkinobho ayevumela plastic, IC chips, digital izingxenye umkhiqizo, ukucacisa imishini, izinto zokuhloba, ware sanitary, ukulinganisa kanye namathuluzi, iwashi izibuko, izinto zikagesi, zikagesi, hardware izesekeli, amathuluzi hardware, ukuxhumana mobile izingxenye, imoto izingxenye, imikhiqizo plastic ukusika, yezokwelapha imishini, izinto zokwakha, amapayipi nezinye ephezulu ukucacisa umkhiqizo wokugubha.
Izinsimbi kanye ezihlukahlukene ze-non-metallic izinto, okusezingeni eliphezulu ubulukhuni Alloys, oxides, Plating, enamathela, ABS, epoxy resin, uyinki plastic, njll
amandla 10W / 20W / 30W / 50W
Beam izinga M2 <1.5
amandla lokukhipha 10% ~ 100% (ngokuqhubekayo kushintshwe)
lokukhipha imvamisa 20kHz ~ 100KHz (ngokuqhubekayo kushintshwe)
(8h) Amandla nokuqina (8h) <± 1% RMS
Focus indawo ubukhulu <0.01 mm
usayizi Ukufaniswa 50X50mm 110mmX110mm 175mmX175mm
Awokuqopha ukujula 1.2mm
isivinini Awokuqopha 800 izinhlamvu standard / yesibili
umugqa Ubuncane ububanzi 0.012mm
uhlamvu Ubuncane 0.15mm
ukunemba okuphindiwe 0.003mm ±
ukusebenza System WindowsXP / 2000/98
imodi Cooling Air Ukupholisa
Temperature wokusebenza imvelo 15 ℃ ~ 35 ℃
amandla imfuneko 220V / isigaba esisodwa / 50Hz / <400W
Previous: 3D Dynamic Focus Series Laser Ukumaka Machine GLD-100 / GLD-200 / GLD-350
Olandelayo: C02 Series Laser Ukumaka Machine CMT-10/30/60/100
Laser Ukumaka Ukuze Metal
Metal Laser Ukumaka
GLF-10 / 30C On-Line Pumped Laser Ukumaka Machine
3D Dynamic Focus Series Laser Ukumaka Machine G ...
C02 Series Laser Ukumaka Machine CMT-10/30/60/100
On-Line Laser Ukumaka Machine GLF-10 / 30C